Slurry mgbapụta, slurry mgbapụta impeller, aro aka uwe - Winclan
Shijiazhuang Winclan Machinery Equipment Co., Ltd.Our isi ngwaahịa na-agụnye iche iche mgbapụta. A na-eji nfuli anyị n'ọtụtụ ebe na nchekwa gburugburu ebe obibi, Ngwuputa, kol, osisi ike ọkụ, mmanụ ala, kemịkalụ, ọgwụgwọ nsị, ụdị ọrụ nchekwa mmiri, ịkọ mmiri, ịwube, wdg. N'otu oge, anyị na-etinyekwa aka na valves, njikwa ndị mbido na akụkụ mgbapụta. Na a dịgasị iche iche, ezi mma, ezi uche ahịa na nkecha aghụghọ, anyị na ngwaahịa na-ọtụtụ-eji mmanụ ala, chemical, na nkà mmụta ọgwụ na ndị ọzọ ọrụ.
Nke a kwadoro ya site na ndị ọrụ nyocha siri ike na ngwa ngwa injinịa na ngwa ọrụ.
Anyị ji onwe anyị elu na-enye enweghị nkebi nnweta ahụmahụ na a raara onwe ya nye ahịa otu na nọrọ na njikere iji hụ na ọ bụla ahịa na-enweta ndị kasị mma ọrụ.
Asambodo anyị 9001: 2008 asambodo ana achi achi nnyefe ndị ahịa chọrọ na-enweghị isịneke.
Slurry mgbapụta ụba efere-032
Coverba Cover efere
YW Submersibel nsị mgbapụta
YZ submersible mgbapụta
CENTRIFUGAL PAMP enweghị ike ịkụda mmiri
Enwere ikuku dị na ntinye na mgbapụta (1) ụfọdụ ndị ọrụ anaghị ejupụta mmiri zuru ezu tupu mgbapụta amalite; mgbe ụfọdụ mmiri nke na - egosi na ọ gafere site na oghere ahụ, mana emeghị ka mgbapụta mgbapụta ghara ikuku kpamkpam, na - ahapụ obere ikuku ka ọ nọ na ọkpọkọ ma ọ bụ mgbapụta The (2) wi ...
Gbanyere mkpị na iwu MUD slurry ọgwụgwọ SCHEME
Kedu otu apịtị na-arụ ọrụ si na ikpo ogwu ahụ agwụ ike? Nke a bụ nsogbu siri ike nke mkpọmkpọ ihe. Omenala mkpọpu ala na grouting ikpo slurry ọgwụgwọ omume bụ: na usoro nke mkpọpu ala ojiji nke sieve, apịtị na obere gravel, ájá na ndị ọzọ siri ike ahụ maka nkewa, pil ...
Eme nnyocha nke Mechanical Seal mebiri nke mgbapụta CENTRIFUGAL
Mmechi mgbapụta Centrifugal na-abụkarị ihe kpatara ọdịda nke akụrụngwa akụrụngwa. Odida nke arụmọrụ nke kasị nke leakage, ihe mere ndị na-esonụ leakage: ic static na ike mgbanaka akara elu leakage, isi ihe kpatara ya bụ: ọgwụgwụ ụgbọelu flatness, ike ike izute ndị req ...